Nubia NX606J ကို Snapdragon 845 နှင့် 6GB RAM ဖြင့် AnTuTu တွင်တွေ့နိုင်သည်။ Androidsis
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Samsung Galaxy S9, Qualcomm Snapdragon 845 SoC ပါရှိသည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်တရားဝင်တင်ဆက်ပြသခဲ့သည်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများသည်ဤပရိုဆက်ဆာကိုလောင်းကစားလုပ်နေပြီဖြစ်သည် Sony က H8266 ကိုအစောပိုင်းကငါတို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း.
အခုတော့ဒါဟာအလှည့်ပါ Nubia NX606J, ဒီချစ်ပ်ကိုသုံးမယ့်ဖုန်းလည်းဖြစ်တယ် AnTuTu ၏ထုတ်ဖော်ချက်များအရ 6GB RAM အပြင် high-end Android ၏ room ည့်ခန်းသို့ will ည့်ခန်းသို့ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
AnTuTu Benchmark အရ ဤစက်တွင် octa-core Qualcomm Snapdragon 845 (4x 75GHz Cortex-A2.8 + 4x 55GHz Cortex-A1.8) တပ်ဆင်ထားသည်Samsung ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကောင်းဆုံးသောချစ်ပ်သည် Samsung Galaxy S9 တွင်ပေါင်းစပ်ပြီးလာမည့်ရက်အနည်းငယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတရားဝင်မြင်ရလိမ့်မည်
ဒါ့အပြင်ထိပ်ဆုံး terminal တစ်ခုအနေနဲ့အရည်အချင်းပြည့်မှီစေမယ့် SoC အပြင် Nubia NX606J တွင် Adreno 630 GPU၊ 6GB RAM နှင့် 32GB Internal Storage ရှိသည်။၎င်းသည် 64GB RAM ပါသော Internal memory 8GB ကိုပြောသောကြောင့်၎င်းသည်မူကွဲတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်ဤကျော်ကြားစံနှုန်းအရသိရသည် ဒီလက်ကိုင်ဖုန်းမှာမျက်နှာပြင်အပြည့်ရှိတယ် 18:9ရှုထောင့်အချိုးအစားသည် Full HD + Resolution 2.160 x 1.080 pixels ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ၎င်းသည် Android 8.0 Oreo ကို operating system အဖြစ်အသုံးပြုထားသည်။ Nubia Z19 လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ဤသည်မှာကောလာဟလများသာဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
နောက်ဆုံးအချိန်တွင် Galaxy S9 + သည် ၂၆၅,၂၆၇ ရမှတ်ရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဤဖုန်း၏ ၂၇၁,၆၇၄ ဖြစ်သော ၂၆၁,၆၇၄ ရမှတ်ရရှိခဲ့သည်၊ ထိုပုံတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။
ဤ Nubia Z19 ၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဘာမျှမသိသေးပါ, ဒါပေမယ့် MWC မှာသူ့ရဲ့ပွဲ ဦး ထွက်အောင်၏စိတ်ကူးလှိမ့်ခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Nubia NX606J ကို Snapdragon 845 နှင့် 6GB RAM ဖြင့် AnTuTu တွင်တွေ့နိုင်သည်။